Itaosy : tra-tehaka ny siramamy 35 taonina -
AccueilRaharaham-pirenenaItaosy : tra-tehaka ny siramamy 35 taonina
Siramamy telo kamiao, izay milanja 35 taonina no saron’ny zandary avy ao amin’ny borigady Itaosy, ny alin’ny alatsinainy hifoha talata 06 Marsa lasa teo tokony ho tamin’ny 01 ora maraina. Fampilazam-baovao, avy amin’ny olona tsara sitrapo, izay milaza fa misy olona mamoaka entana mampiahiahy eny antanivory Bemasoandro Itaosy tamin’io fotoana io. Nidina teny an-toerana nijery ny zava-nisy ireo mpitandro ny filaminana, ka tratra teo tokoa ny kamiao iray nitondra siramamy milanja eo amin’ny 08 taonina niaraka tamin’ny olona miisa efatra , izay nahitana ny mpamily sy ny mpanampy azy ary ireo olona roa mitonona ho tompon’ ireo entana nampiahiahy ireo. Notakian’ireo zandary ny taratasy manamarina fa azy tokoa ireo siramamy ireo saingy tsy nananan’ireo olona ireo izany. Voaporo fa tena siramamy halatra tokoa ireo tra-tehaka ireo, ary niaiky izany ihany koa ireo olona ireo rehefa nosamborina sy nanaovana famotorana. Notanana daholo ihany koa ireo siramamy ireo. Niditra avy hatrany tamin’ny fisavana ny tranon’ireo olona ireo ihany koa ny manam-pahefana avy eo ka mbola nahatratrarana siramamy 19 taonina ihany koa tao amin’ny tranon’izy ireo.
Notohizana ny fanadihadiana, ka hita sy fantatra ny tompon’ireo siramamy ireo. Nilaza ity farany fa avy any Toamasina izany ary alefa eny Antohomadinika. Nahagaga azy ny fahenoana fa tany Itaosy no nahitana ireo entana halatra ireo. Mbola nolazain’io olona io ihany koa fa mitotaly 35 taonina ny siramamy nentin’ireo kamiao miisa telo ireo. Dia nankaiza izany ny 08 taonina ambiny? io no fanontaniana nipetraka avy hatrany. Rehefa nidirana tamin’ny lalindalina kokoa ny famotorana ireo olona dia nambaran’izy ireo fa efa nalefa sy namidy tany Miarinarivo Itasy ny 08 taonina ambiny. Nidina tany an-toerana taorian’izay ireo zandary, ka sarona tany ireo entana ireo niaraka tamin’ny olona nandray azy, ary rehefa natao ny famotorana dia niaiky tokoa izy ireo fa entana halatra izany. Raha atambatra izany dia miisa sivy, izay hahitana vehivavy roa no voarohirohy sy voasambotra momba ity raharaha ity. Malaza ny resaka famakiana kaontenera mpitondra entana, avy any amin’ireo lalam-pirenena amin’ izao fotoana izao, ary efa maro ny fitarainana voarain’ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena momba izany. Atolotra ny fampanaovana anio izy sivy mianadahy ireo.